झाँक्रीको प्रश्न : अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा नैतिक प्रश्न सकिन्छ ? - Deshko News Deshko News झाँक्रीको प्रश्न : अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा नैतिक प्रश्न सकिन्छ ? - Deshko News
‘मानवीय संकटको यो बेला एकाएक मन्त्रीपरिषदबाट बिबादास्पद अध्यादेश पास गर्नु शीतलनिवासबाट खाम साटेर हिड्नु, विपक्षी दलका सांसदलाई अपहरण शैलीमा होटलमा राख्नु, अनि बहुराष्ट्रको उदेश्य पुरागर्न मधेशबादी दलको एकता, के नेपाली राजनीतिका यि सामान्य घटना हुन? यि घटनाको पछाडी कसको हात छ? खोजौ।’ नेकपाभित्र अध्यादेश विवाद उग्र रुप लिइरहेको बेला झाँक्रीले अर्को ट्वीट गरेकी थिइन्।
सरकारले अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णयलगत्तै उनले फेरि अर्को ट्वीट गरिन् ‘अध्यादेश फिर्ता भयो रे, के योसंगै सम्पूर्ण राजनितीक र नैतिक प्रश्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ सकिदैन। अब के हुन्छ?’
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेश जारीपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र विवादले उग्र रुप लिएको थियो। नेकपाभित्र बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। चौतर्फि विरोध र आलोचनापछि मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धित दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिले शुक्रबार खारेज गरेकी थिइन्। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट